Bogga ugu weyn Ma iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta? Sida Loogu Sameeyo Taas Waqti Yar
Dhowr usbuuc ka hor, waxaan la sheekaystay deriskeyga xiga, Janet, dhowr fikradood oo aan kala sooc lahayn. Isla markii aan ku jirnay wada sheekaysigayagii, Janet ayaa su’aal i gelisay, “ii sheeg, ma iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta?”
Waxaan ula jeedaa, taasi waxay ahayd arrin yaab leh oo qosol badan, oo ka baxsan mawduuca wada -hadalkayaga. Eegga wejigayga ayaa ka muuqday. Waxa aan kari waayay in aan si qosol leh u qoslo.
Waa hagaag, su'aashaasi waxay beddeshay wadadii wada hadalkayaga. Waxaan isku dayay intii karaankeyga ah inaan ka jawaabo oo aan wax u sharaxo. Waxa aan u sheegay ayaa dhab ahaan ah waxa aan rabo inaan kula wadaago. Marka, waligaa ma yaabtay, "sideen ku iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta?" Waxaan ka jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaaga halkan.
Dhawaan, wax badan ayaa la tixgeliyaa haddii aad raadineyso inaad iibsato baabuur. Sababtuna waxay tahay in gadashada baabuurtu ay tahay hawl aad u culus oo runtii qofku u baahan yahay inuu ka fiirsado ka hor inta uusan gelin. Mid ka mid ah arrimahan oo kale in la tixgeliyo waa dakhligaaga marka loo eego nooca baabuurka aad rabto.
Khadadka soo socda, waxaan si buuxda u eegi doonnaa qaar ka mid ah waxa ay tahay inaad tixgeliso ka hor intaadan gaadhi qaadan iyo tan ugu muhiimsan haddii aad u adeegsanayso kaarka amaahda si aad u iibsato baabuurkaaga cusub.
Dhanka kale, waa kan jadwalka mawduucyada hoose ee muuqaalka guud ee waxa laga filayo maqaalkan.
Hadda, aan hoos u dhigno liiska ...
Ma tahay Fikrad Wanaagsan in lagu Iibsado Baabuur leh Kaarka Deynta?
Si daacadnimo leh, tani waa su'aal aad u adag in laga jawaabo. Waxyaabo dhowr ah ayaa sida caadiga ah loo tixgeliyaa arrintan.
Mid ka mid ah qodobbada waaweyn ee la tixgelinayo marka baabuur lagu iibsanayo kaarka deynta ayaa ah xadka amaahdaada. Haddii aadan haysan kaar bixiya xaddi deyn oo sarreeya, waxaa laga yaabaa inaadan ka fikirin inaad bixiso qiimaha buuxa ee baabuurka adoo adeegsanaya kaarka deynta.
Mid ka mid ah sababaha ay tani muhiim u tahay ayaa ah sababta oo ah qaar ka mid ah amaahiyayaasha ayaa si xad dhaaf ah lacag uga qaata markay ku amaahdaan lacagta aad ku iibsanayso gaarigaaga.
Si kastaba ha ahaatee, haddii xadkaaga amaahdaadu bixin karo qiimaha buuxa ee baabuurkaaga cusub oo dakhligaagu aad u weyn yahay si aad u biiliso dhammaan biilasha, markaa waxaad ku bixin kartaa baabuurkaaga kaarka deynta.
XIDHIIDHKA: Faallooyinka Lenda Mortgage 2022: Sida ay u Shaqayso | Ma Xalaal Baa Mise Waa Khiyaamo Cusub Oo Daynta Ah
Laakiin haddii aad ogtahay inaad ku dhibtoon lahayd bixinta lacagtaada oo aad weli haysato jeeg wareejin dheelitir, waxaan kugula talinayaa inaad ka soo baxdo iibsashada baabuur leh kaarka deynta.
Kuwa ka ganacsada Baabuurtu Ma Qaataan Kaararka Amaahda?
Ganacsatada badankoodu ma aqbalaan kaararka amaahda si lacag -bixin buuxda loo siiyo. Asal ahaan waxaa jira laba sababood.
Mid ka mid ah sababaha ayaa ah haddii aad si buuxda u bixiso kaarkaaga deynta oo aadan ku faraxsanayn iibsigaaga, waxaad u gudbin kartaa cabasho ka dhan ah ganacsadaha shirkadda kaarka oo ganacsadaha waxaa dib loogu soo dallacayaa iibinta.
Marka labaad, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ku soo iibsadaan kaarka deynta la xaday taasina waxay khatar ku noqon kartaa iibiyaha. Mulkiilaha asalka ah ee kaadhka ayaa xannibi kara kaadhka wakhti kasta, ganacsadahana waligiis ma heli doono lacagtiisa. Qofna ma rabo inuu lumiyo lacagta aad taqaan.
Marka saddexaad, inta badan ganacsatadu waxay bixiyaan khidmad qiyaastii 1 ilaa 4 % ah shirkadda kaararka deynta taasina waa lacag dheeraad ah iyaga. Tusaale ahaan, 2% iibka $50,000 waa $1,000 albaabka ka baxa. Dad badan ma rabaan inay bixiyaan lacag-bixinno aad u badan.
Kuwaani waa qaar ka mid ah sababaha ay ganacsatadu u door bidaan inay lacag-dhimis ku helaan xitaa haddii aad ku bixinayso kaarka deynta.
Waa maxay hoos u dhigista? Lacag-bixin-dhimistu waa nooc lacag-bixineed, oo badiyaa lacag caddaan ah, oo lagu sameeyo marxaladaha hore ee iibsiga alaab ama adeeg qaali ah.
Lacag -bixintu waxay ka dhigan tahay boqolkiiba qiimaha iibsiga oo buuxa. Xaaladaha qaarkood, lacag -bixinta hore lama soo celin karo haddii heshiisku dhaco sababtoo ah iibsadaha.
Waa kuwee kuwa ka ganacsada Baabuurta ee Qaata Kaararka Amaahda?
Sidaan horay u sheegay, ma jiraan qaar badan oo ka mid ah ganacsatada kuwaas oo raba inay kuu oggolaadaan inaad ku bixiso kaarka deynta.
Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa heshiisyo wanaagsan copart.com. Waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan xoogaa heshiisyo ah kaarkaaga deynta.
XIDHIIDHKA: Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Intee in leeg ayaad ku shubi kartaa kaarka amaahda marka aad gadato baabuur?
Intee in le'eg ayaad ku shubaysaa kaarka deynta marka aad iibsaneyso gaarigaaga inta badan waxay ku xiran tahay qiimaha gaariga. Laakiin iyada oo aan loo eegin xaqiiqadan, ganacsadeyaal aad u badan ma aqbalaan kaararka deynta.
Waxaan hore uga soo hadalnay qaar ka mid ah sababaha ay sidaas u tahay. Laakiin haddii aad waligaa hesho ganacsade kasta oo bixiya inuu kaa aqbalo kaarka deynta, markaa kama badnaan doonto $ 3000.
Siyaasadda xaddidaadda kaarka deynta ee $ 3,000 meel walba waxaa si adag u ilaaliya dhammaan ganacsatada baabuurta.
Si aad u daboosho inta kale ee iibsiga gaarigaaga, waxaad u baahan doontaa inaad la timaaddo lacag caddaan ah ama aad deyn ka dalbato bangigaaga. Haddii aad iibsaneyso baabuur raqiis ah oo la isticmaalo, dhanka kale, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ku dallacdo qiimaha wax iibsiga oo dhan.
Sideen U Iibsan Karaa Baabuur Kaarkayga Deynta Ah?
1. Leedahay Kaarka Iibsiga 0%
Waxa ugu horreeya, waa inaad leedahay kaar aan kaaga baahnayn inaad dulsaar ku bixisid iibsiyadaada. Kaliya hal nooc oo kaar ayaa kan sameeya oo ah 0% kaarka APR ee la iibsado.
Ka dib markaad sugto kaar leh qiime 0% ah, waa inaad sameysataa deyn toos ah bil kasta. Lacag -bixinta tooska ah waa inay buuxisaa ugu yaraan bixinta ugu yar. Si kastaba ha noqotee, deymaha waaweyn ee sidan oo kale ah, waxaa ugu wanaagsan inaad ka shaqeyso inta aad u baahan tahay inaad bixiso bil kasta si aad u bixiso deynta ka hor intaan 0% muddadu dhammaan.
Markaad ka shaqaynayso inta aad bixinayso bishii, u qaybi kharashka baabuurka inta bilood ee kaarkaagu haysto 0%. Haddii tani ay noqoto mid ka badan inta aad awoodid, markaa waxaad u baahan tahay inaad eegto kaararka ka jaban ama aad hesho hab aad ku kordhiso 0% caadadaada.
2. Hubi Haddii Ganacsadahaagu Aqbalo Kaararka Amaahda
Waxa xiga ee la samaynayaa waa in la hubiyo in ganacsadaha aad damacsan tahay inaad ka iibsato baabuurka uu aqbalo kaararka deynta. Haddii ganacsadahaagu uusan qaadan kaararka deynta, waxaad weli ku bixin kartaa 0% dulsaar adigoo isticmaalaya kaararka 'xawilaadda lacagta'. Soo ogow sida tani u shaqeyso halkan.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Codsado Amaahda PPP | Habka Tallaabo-Talaabo ah
3. Tixgeli Xadkaaga Amaahda
Qodob weyn marka aad baabuur ku iibsaneyso kaarka deynta waa xadkaaga amaahda. Haddii aadan haysan kaar bixiya xaddi deyn oo sarreeya, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ku maalgeliso qiimaha baabuurka kaarka deynta.
Chase safayr Reserve waa tusaale kaar ku siinaya xad sare oo credit. Laakin haddii buundada credit-kaagu ay hooseyso si aad baabuur u iibsato, waad awoodi kartaa baro sida loo kordhiyo dhibcaha dhibcahaaga halkan.
Halkee baan ka iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta?
Waxaad ka heli kartaa heshiisyo wanaagsan copart.com. Waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan xoogaa heshiisyo ah kaarkaaga deynta.
Ugu dambayntii, hubso inaad qaadato go'aankaaga ku aaddan helitaanka baabuurkaaga cusub oo leh maskax furan. Si habboon u miisaam fursadahaaga kahor intaadan boodin.
Hal shay oo maskaxda lagu hayo ayaa ah inaad lacag ku ridi karto kaarkaaga deynta micnaheedu maahan inaad tahay. Guud ahaan, waxaa fiican inaad isticmaasho kaarkaaga kaliya haddii aad haysato kaarka deynta oo abaalmarin ah oo aad awoodid inaad iska bixisid bixinta hoose marka aad hesho biilkaaga.
Mar labaad, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in gadashada baabuurka leh kaarka deynta guud ahaan ay macno sameyneyso oo kaliya haddii aad gacanta ku haysato lacag caddaan ah si aad u bixiso dheelitirka. Haddii kale, waxay u badan tahay inaad bixin doonto dulsaar ka badan intaad ku bixin lahayd deyn baabuur.
Markaad go'aansato inaad bilowdo ganacsi, waa inaad u diyaar garowdaa inaad maal gashato kaliya maahan waqtigaaga iyo…
Dhaqaale yari waxay dadka ka dhigi kartaa quus. Aad bay quus uga yihiin inay amaah ka qaataan qof walba, waana…
Dib u eegista amaahda shakhsi ahaaneed ee Wells Fargo: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Wells Fargo, oo ah mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Mareykanka, waa meel aad u badan tahay haddii aad…
Dhowr fursadood oo lacag lagu kasbado ayaa nagu hareeraysan maalin kasta. Maxaa inta badan naga hor istaaga ku boodista fursadahan inta badan…